केकीसँग काम गर्न कम्फर्ट लाग्छ – Mero Film
केकीसँग काम गर्न कम्फर्ट लाग्छ
दिपेन्द्र घिमिरे – भिडियो जकीबाट म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर हुँदै चलचित्र निर्देशनमा हाम फालेका विशाल भण्डारी ग्लामर क्षेत्रमा चिनाइराख्नुपर्ने नाम होइन । उनले डेब्यु निर्देशन गरेको र चर्चित नायिका केकी अधिकारीले लगानी गरेको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ आगामी साता (वैशाख १४) बाट प्रदर्शनमा आउँदै छ । फिल्म नचल्दै चर्चामा रहेकाले यो कमेडी फिल्मबाट केकीले निर्माण करिअर र विशालले निर्देशन करिअरमा ठूलो आशा राखेका छन् । मिडियाकर्मीका रुपमा सँगालेको अनुभव म्युजिक भिडियोमा खार्दै फिल्म निर्देशनमा होमिएका विशालको संघर्षको अन्तरकथा आफैंमा चलचित्र जस्तो छ ।
एउटा म्युजिक भिडियो निकालेर सांगीतिक क्षेत्रको ढोका खोलेका मात्र थिए, विशाललाई च्यानल नेपालमा भीजेको जागिरको अफर आयो । ‘विष्णु अधिकारी दाइले च्यानल नेपालमा भीजेको पोस्ट खाली छ गर्ने हो त भन्नुभयो,’ उनी करिअरको सुरुवातको त्यो दिन सम्झन्छन्, ‘अनि मैले पनि एक्स्पोजर राम्रै हुन्छ भनेर च्यानल नेपाल ज्वाइन गरेँ । त्यो यात्राले आज यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो ।’
च्यानल नेपालमा काम गर्दागर्दै क्यामेरामेन अमृत सुनुवारसँग निकै नजिक भए उनी । त्यसपछि के चाहियो ? अमृतले विशालभित्रको प्रतिभा बाहिर ल्याउन गर्नुसम्म गरे । ‘हामी यति क्लोज भयौं कि वास्तवमा मलाई यो फिल्डको एबीसीडी नै अमृतले सिकायो,’ विशालले अमृतको पंशसा गर्दै भने, ‘यात्रा सजिलो हुँदै गयो, प्रोग्राम राम्रो हुँदै गयो । सिनेम्याट्रोग्राफर नै तपाईंको गुरु बनेर केही सिकाउँछ भने तपाइँको करिअर बुस्ट बुम हुन्छ भन्ने उदाहरण म बनेँ जस्तो लाग्छ ।’
त्यतिबेला भीजेहरुले म्युजिक भिडियो बनाउने ट्रेन्ड चलिरहेको थियो । विशाललाई उनकै एल्बम निकालेको कम्पनीले नयाँ काम अफर गर्‍यो । ‘मैले त्यो चुनौती स्विकारेँ तर सुरुमै आफैं डाइरेक्सन गरिनँ, अमृतलाई भनेँ । उसले मनोजरत्न शाहीलाई त्यो जिम्मा दियो,’ निर्देशन यात्रा सुरु गर्दाको विगत सम्झिए उनले । त्यो मात्र होइन, १६-१७ वटा म्युजिक भिडियोमा सहायक बनेर काम गर्दै अनुभव सँगाले । अनि बल्ल आफैं निर्देशनको ह्यान्डिल सम्हाले ।
सतिश महर्जनको ‘भैगो म भुलिदिन्छु’ बोलको गीतमा उनले म्युजिक भिडियो बनाए । ‘त्यही मेरो फस्ट भिडियो थियो । त्यसपछि २ वर्षजति मलाई भिडियो बनाउने अफर आएन । जब नेपाल वान छिरेँ, अनि ‘तिमी हिँड्ने गोरेटोमा’ गीतको भिडियो गरेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘सतिशको गीत धेरै माथि थियो, भिडियो पनि राम्रो थियो तर चलेन । अर्पणाजीको त्यो गीत सुन्दा ठिकठिकै लागेको थियो तर सुपर हिट नै भयो । अर्पणाजीले अवार्ड पनि पाउनुभयो । त्यसले मेरो भिडियो डाइरेक्सनको करिअर एकदमै अगाडि बढायो ।’
त्यसपछि उनले फुर्सदै पाएनन् । एकपछि अर्काे म्युजिक भिडियोका कामको थाक लाग्न थाल्यो । महिनामा दर्जन भन्दा बढी भिडियो बनाउन थाले । अन्जु पन्तको ‘साथी’ म्युजिक भिडियोले उनको करिअर बुस्ट गर्‍यो । ‘यो कामले मलाई यसले राम्रो भिडियो बनाउछ है भनेर मिडियामा चिनायो । तर अडियन्समा भने तिमी हिँड्ने गोरेटोले नै अगाडि पुर्याएको हो,’ उनले भने । करिअरलाई माथि उचाल्न उनको विगतको सम्बन्धले पनि काम गर्‍यो । मिडियाकर्मी भएकाले मिडियामा छाउन कुनै पापड बेल्नुपरेन । दिनदुगणा हिट हुँदै गए । लोकप्रियतासँगै कामले दपेट्दै लग्यो ।
सफल र व्यावसायिक म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरका रुपमा नाम कमाइसकेपछि अब विशालको करिअरले नयाँ मोड लिनु थियो । त्यो मोड बनाउन नायिका केकी अधिकारी ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को डोजर लिएर अघि सरिन् । र, विशाल त्यो मोड पार गर्दै सहजै अघि बढ्न सफल भए ।
उनी एउटा फिल्ममा अभिनय गरिरहेका थिए । डाइरेक्टर एकदम बिजी । सुटिङ अघि बढ्नै सकेन । सबै दिक्क भइरहेका थिए । त्यही बेला एउटा म्युजिक भिडियो प्रोजेक्टका क्रममा केकी अधिकारी, अर्जुन तिवारी र विशालबीच ब्रेकमा नयाँ आइडियाबारे कुरा भएछ । ‘पछि भेटमा आइडिया सुनिसकेपछि केकीले मलाई दाइ यो चल्छ त, तपाईं कन्फिडेन्ट हुनुहन्छ भनेर सोधिन्, मैले चल्ने नै यस्तै हो आजकल भनेँ । त्यसपछि प्रोजेक्ट डन गरियो,’ कोहलपुर एक्सप्रेस फिल्मको सोच जन्मँदाको किस्सा विशालले सुनाए ।
केकीलाई फिल्म बनाउने इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखि रहेछ । आफूले सिरियस सिनेमा गरिसकेको हुनाले कमेडी बनाउँदा नै कमर्सियल बन्नेमा उनी कन्भिन्स भइन् । दर्शकलाई हेरेर केकी र विशालले प्रोजेक्ट अघि बढाए । केकी प्रोड्युसर बनिन्, विशाल डाइरेक्टर । ‘हामी दुईको कुरा मिलेर उसले प्रोडक्सन र मैले डाइरेक्सन गर्ने निर्णय गरेर काम गरियो,’ उनले भने, ‘अब दर्शकमाझ हाम्रो काम जाँदै छ,, उहाँहरुले मनपराइदिनुभयो भने हाम्रो सुरुवात सफल हुनेछ ।’
कस्तो फिल्म हो कोहलपुर एक्सप्रेस ?
उनी भन्छन्, ‘यो महिला केन्द्रित फिल्म हो । तर महिलावादी होइन । लिडिङ क्यारेक्टरमा चर्चित एक्ट्रेस केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की र रिचा शर्मा छन् ।’
केकीको करिअरमा मोड बदल्ने कामको ह्यान्डिल विशालको हातमा छ । यो कसरी सम्भव भयो त ? भन्छन्, ‘कोसँग मान्छे कसरी कम्फर्ट फिल गर्छ भन्ने हो । उहाहरुसँगको चिनजान पुरानो हो । रिमासँगको चिनजान पनि पुरानो हो । करिअर स्टार्ट गर्दादेखि नै भेटघाट भएको । साथी भएकाले ६ महिनामा एकचोटि भेट्दा पनि हामीबीच आत्मीयता देखिन्छ । यसैले हामीलाई सँगै करिअरलाई नयाँ मोड दिने अवसर जुरायो ।’
म्युजिक भिडियो निर्देशन र फिल्म निर्देशनमा के फरक छ ?
विशालको अनुभव छ, ‘म्युजिक भिडियोमा आफैंले कन्सेप्ट क्रिएट गर्नुपर्छ तर फिल्ममा अलरेडी स्क्रिप्ट हुन्छ । पहिले बाउन्ड्रीमा बसेर काम गर्थें त्यसका शब्दलाई लिएर मैले नै स्केच गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने फिल्ममा मैले एउटा दुनियाँ बनाएर सबैलाई काम गराइरहेको छु ।’
निर्देशक त्यो बेला मात्रै निर्देशक बन्छ, जुन बेला उसलाई हरेक चिजको सामान्य ज्ञान हुन्छ । उनको अनुभवमा एउटा निर्देशकलाई फिल्म मेकिङ, सम्पादन, सिनेम्याटोग्राफी, ब्याकराउन्ड साउन्ड भीएफएक्ससम्म जानकारी भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको मतलब सर्वेसर्वा निर्देशक हैन तर एउटा राम्रो टिम बनाउन यी सबै जान्न जरुरी छ । ‘नेपाली फिल्ममा एक्स्पर्ट टिम बनाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । किनकि टेबलमा बसेर गर्ने काम स्टोरी क्रियट गर्दा उसले बेस्ट अफ द बेस्ट नै गरेको हुन्छ । तर त्यो स्टोरीलाई चाहिने १०० जनाको टिम कस्तो बन्छ, त्यो नै मेजर च्यालेन्ज हो । त्यसले नै आउटपुट कस्तो आउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ विशालको बुझाइ छ ।
‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कसरी अघि बढ्छ ? एउटा बसभित्रका यात्रु छन्, यसको यात्रा कहाँसम्म जान्छ त ?’
भन्छन्, ‘यसको यात्रा वैशाख १४ गते हलसम्मको हो । त्यसपछि तपाईंहरुको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? त्यसपछि दर्शकले रुचाइदिनुभयो भने मेरो जर्नीको यो फिल्मबाट सफल सुरुवात हुनेछ ।’ विशाल आफ्नो सफल सुरुवात हुनेमा निकै आशावादी छन् । त्यसको राज हो, मिहिनेत । उनी भन्छन्, ‘महिनाको १०-११ वटा म्युजिक भिडियो गर्ने मान्छे, अहिले एकदुइटा मात्र गर्छु, पूरै समय यही फिल्मलाई दिएको छु । प्री–प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनसम्म खुबै मिहिनेत गरेको छु, परिणाम राम्रै आउला भन्ने अपेक्षा छ ।’
कोहलपुर एक्सप्रेसपछि के गर्ने विचार छ त ?
उनका सहकर्मीहरुले त यसको सिक्वेल नै तयार भइसक्यो भन्ने गसिप गर्दैछन् । उनी यसलाई गसिपमै रहन दिन आग्रह गर्छन् । ‘त्यो मेरो जन्मदिनको कुरा हो । उहाँहरुले मलाई बोलाउनुभयो र कोहलपुर एक्सप्रेस २ भनेर दिनु पनि भयो । मसँग छ मैले सजाएर राखेको छु । त्यसलाई मैले मेरो कामको एप्रिसियसन मानेको छु,’ विशालले गसिपको चुरो उखेले ।
नेपालमा म्युजिक भिडियो गरेकाले निर्देशन गरेको फिल्म एकपछि अर्काे फ्लप भएका छन् । यो देख्नेहरु विशालको भविष्य पनि उज्ज्वल देख्दैनन् । उनको बुझाइ भने त्यसको उल्टो छ । म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरले बनाएका सबै फिल्म फ्लप भएको मान्दैनन् उनी । ‘सयमा ५ प्रतिशत होला,’ उनले भने, ‘म्युजिक भिडियो नगरेकाहरु सबै सफल भएका पनि त छैनन् नि ?’ विशाल बोले ।
कोहलपुर एक्सप्रेस हेर्न हलसम्म किन जाने ? यसको रेडिमेड जवाफ छ उनीसँग । ‘यो फुल कमेडी फिल्म हो, हामी सबै मिलेर दर्शकलाई हँसाउँछौं । यसले पूरा मनोरञ्जन दिने छ,’ विशाल भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले कमेडी फिल्मको सक्सेस रेट हाई भएकाले आशावादी छु ।’
२०७५ वैशाख ९ गते १०:५७ मा प्रकाशित